Saturday April 23, 2016 - 16:20:45 in Articles by Super Admin
(Rating 2.8/5 Stars) Total Votes: 5
1- Mukhalaska qaaday dadka ugu badan ee dhintay waxaa lagu magacaaa Xamse Cabdiraxmaan,wuxuu u dhashay Ciidagale ,wuxuu doomtay quustay saaray 85 qof oo u dhashay Habaryoonis iyo Ciidagale,waana ninka la saaxiibkaa Mukhalasiinta Carbeed ee Masaaridda ,waxaa dhamaan dadka la qaaday ay dhigteen Lacagtooda Xawaaladaha Dahabshiil iyo Mustaqbal Express,waxaana lacagta inta badan loo dhiibay nin lagu magacaabo Bashiir Baaruud oo u dhashay isaaq Habar Awal.
"Wiilashii ka badbaaday doomta qalabintay ayaa xogtaan na siiyay,waxeey sheegeen iney lacagtooda dhigteen Dahabshiil iyo Mustaqbal,uuna ka qaaday Bashiir Baaruud”
2- Mukhalaska 2-aad ee halista badan,dhalinyaradana u diray Visayaasha ay Hargeysa,Garowe iyo Muqdishu uga yimaadeen waa Ku simaha Safiirka Somalia u fadhiya dalka Masar oo u dhashay beesha Tuni laguna magacaabo Ilyaas Sheekh Cumar ?
ilyaas Sheekh Cumar waa ninkii diiday in la Aaso wiil Somalia ,kadibna meeydkiisa gashtay filinti jeer. sida ay horey u sheegtay gabadh la dhalatay wiilkaas oo Talyanigga uga tagtay iney duugato meeydka walaalkeed.
3- Ninka 3-aad ee Mukhalaskaa, haligayna nolosha boqolaalka qof ee Somaliga waxaa lagu magacaabaa Axmed Maxamed Jamac ,waxaa loo yaqaan Axmed Khaliif,wuxuu Jaamacad ka dhameeyay Masar,waana ninka dadka ka soo tahriibiyay Hargeysa.
Ninkaan Axmed Khaliif waa ninkii Xafiiska ugu furnaay Hargeysa,waxeey isku reer hoose yihiin Wasiirka Warfaafinta Somaliland Mr Cadani oo la xaqiijiyay inuu si weyn ugala shaqeeyo hoowlahaan tahriibinta dadka.
Axmed Khaliif Aabahiis wuxuu ahaay Caaqil Muuse Caare,halka walaalkiina Caaqil yahay.
Haddii aad xasuusataan ninkaan u dhashay Isaaq,Garxajis,Habaryoonis,Muse Caare waa ninkii lagu sheegay qunsulka Safaaradda Somalia ee Masar,waa ninkii gabadhii reer Burco lagu yiri,warqad hakuu soo qoro si meeydkaaga laguu siiyo kadibna Odaygii gaboowga ahaay ee reer Burco ugu safray dartiis Hargeysa.
4-Ninka 4-aad ee halista badan waxaa lagu magacaabaa Cabdi Yaasiin Yool,wuxuu u dhashay Isaaq,Habarjeclo,Suula Madoow,wuxuu ninkaan sheegtaa inuu yahay Wariye,wuxuuna dalka Masar uga waramaa Horncable TV.
Ninkaan Habarjeclo,waa ninka badda gelshay gabadh ay dhashay hooyadii ooyneeysay ee reer Burco oo iyaduna ah ,Habarjeclo Suula Madoow ? Wariyahaan Aabahiis waa Caaqil beesha Suula madoow ee Habarjeclo.
5- Ninka 5-aad oo ay wada shaqeeystaan Cabdi Yaasiin Yool waxaa lagu magacaabaa Cabdi Fitaax Cabiid Ismaaciil Ankar, wuxuu u dhashay Isaaq gaar ahaan beesha Arab,Samane. Wiilkaan Aabahiis waa ganacsade caana oo reer Hargeysa ah,waxaa dhalay Ismaaciil Ankar waana ganacsadaha geeya Caanaha loo yaqaan Ankar.
Cabdi Yaasiin Yool iyo Cabdi Fitaax Ankar waxeey badda geliyeen ,oo lacag ka qaateen 75 qof oo lagu qaaday 5 bus,waxaa baskiiba saarnaay 15 qof ? dhamaana dadkaas waxaa ka badbaaday 8 wiil.
Cabdi Fitaax Ankar wuxu ku xiran yahay nin dadka ka soo tahriibiya Sudan oo lagu magacaabo Ilkacase.
6- Ninka 6-aad ee haligay dhalinyaradii Soomaaliyeed waxaa lagu magacaabaa Maxamed Taqal,wuxuu u dhashay Ogaadeen,Reer Cabdulle,waana nin caan ka ahaay Sudan oo Mukhalasnimada ku shaqeeysan jiray mudo dheer.
Ninkaan Ogaadeen ee Maxamed Taqal wuxuu dadkii baxay ku lahaay 17 qof oo dhamaantood Ogaadeen u dhashay.
Ninkaan waxaa dhinaca lacag aruurinta u qaabilsan nin lagu magacaabo Cabdiraxmaan Amerika,waxaana lacagta loo dhigay Xawaaladda Amal Express,waxaana lacagtaas loo dhiibay oo weli haayo nin u dhashay beesha Majeerteen oo lagu magacaabo Maxamed Taraawiil.
7- Ninka 7-aad ee haligay dadkii ugu badnaay waxaa lagu magacaabaa Cabdi Xakiin Diiriye Nabadoon,wuxuu u dhashay Majeerteen,waxaa dhinaca kale laga xiray dad badan oo u lacag ka qaatay kuwaas oo dhan 78 qof ,wuxuuna doonayaa inuu ka baxsado Masar oo wuxuu sugayaa Doom uu laftiisa ku tahriibo.
Ninkaan dadkii uu Doomtii qalabintay saaray waxeey lacagtooda u dhigeen Xawaaladda Amal,waxaana u haayo Maxamed Tarawil oo isagana Majeerteen ah.
Dhalinyaradda tahriibka ku dhamaaday waxeey u badan yihiin dhalinyaro Somalia looga soo kaxeeyo iney arday yihiin,waxaana Visayaasha u xareeya Safaaradda Somalia.
Xarunta Xamar waxaa jooga nin lagu magacaabo Cabdi Qani ,waxaana Masar Visayaasha ka xareeya Ilyaas Sheekh Cumar iyo Axmed Bashiir,waxaana qofkiiba laga qaatay 4500$.
Xarunta Hargeysa ee dhalinyarta laga soo tahriibsha waxaa ka madaxa nin lagu magacaabo Cabdiraxmaan Cali oo ah Axmed Khaliif seedigiis.
Dadka doomta la qalibantay waxaa badankood laga qaaday lacag dhan laba kun oo dollar,laba kun iyo shan boqol ,ilaa seddex kun oo dollar.